Senior Loan Officer Archives - Glory Assumption Space
Senior Loan Officer – Male (5) Posts
Location in : Ayeyarwaddy
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဘုရင့်နောင်မြို့နယ်ရှိ Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.Senior Loan Officer – Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ ဧရာဝတီတိုင်း။ - Diploma in Agriclture. - Age about 30 years. - Computer literate (MS Word,Excel) - Excellent services and communicate skills. -3years of working experiences as senior position in Microfinance field. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Senior Loan Officer – ကျား ၊ မ - ( ၆၀ ) ဦး
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Senior Loan Officer – ကျား ၊ မ - ( ၆၀ ) ဦး /လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ဘုရင့်နောင် မြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်အောက် ဖြစ်ရမည် ။ • ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးတတ်ရမည် ။ ( Microsoft Word / Excel ) • စကားပြော ချိုသာပြေပြစ်ရမည် ။ • အသေးစား ၊ အလတ်စား ငွေချေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်သက် ( ၂ ) နှစ်ရှိသူများ ဦးစားပေးမည် ။ • ကျောင်းကုန်း ၊ ဟသာ๎တ ၊ ညောင်တုန်း ၊ မန္တလေး ၊ မကွေး ၊ အောင်လံ နှင့် မှော်ဘီ မြို့များတွင် လုပ်ကိုင် နိုင်ရမည် ။ • အတွေ့ အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာ ညှိုနှိုင်း နိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_2494" align="alignnone" width="2053"] Business woman at work[/caption]
Senior Loan Officer – Male/Female - (60)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဘုရင့်နောင်မြို့နယ်ရှိ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ချီသော Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Any graduate with diploma or certificate in related field are preferred. • Age under 30 years. • Computer literate (MS Word,Excel),Excellent services and communication skills. •2years of working experiences in Microfinance field are more prefer . • Available to work at Kyaung Kone.Hinthada ,Nyaungdone ,Mandalay,Magway,Aung Lan and Hmawbe. • အတွေ့ အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာ ညှိုနှိုင်း နိုင်သည်။
Senior Loan Officer - Male/Female (10) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Senior Loan Officer – Male/Female (10) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ကျပ်(အထက်)/မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်။ • Any graduate with diploma or certificate in related field are preferred. • Age under 30 years. • Computer literate (MS word,Excel),Excellent services and communication skills. •2years of working experiences in related field are more than prefer. • Available to work at Kyaung Kone,Aung Lan,Hinthada,Magway,Hmawbe and Tike Gyi Township. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )